Wasiirka amniga dowladda Puntland oo ka hadlay safarkiisa Dhahar uu ku joogo. | puntlandi.com
Wasiirka amniga dowladda Puntland oo ka hadlay safarkiisa Dhahar uu ku joogo.
Wasiirka Amniga iyo DDR-ka dawladda Puntland Axmed Cabdullaahi Yuusuf iyo wafti balaadhan oo uu hoggaaminayo ayaa kormeer shaqo ku joogo magaalada Dhahar ee xarunta gobolka Hayland, halkaasi oo ay si diiran ugu soo dhoween shacabka magaaladaasi.
Wasiirka Amniga iyo DDR-ka dawladda Puntland ayaa waxaa safarka ku wehelinaayey Wasiiru dowlaha Xanaanada xoolaha, Wasiir Ku-xigeenka Duulista Hawada iyo garoomada Puntland, taliyayaasha ciidamada Booliiska iyo Daraawiishta ee gobolada Sagaag iyo Hayland. Waxaana banaanka magaaladda ku soo dhaweeyay Guddoomiyaha gobolka Hayland, Duqa Degmada, Isimada iyo cuqaasha gobolka, ururada Haweenka iyo dhalinyarada iyo guud ahaan shacabka degmadda Dhahar.
Wasiirka Amniga iyo DDR-ka dawladda Puntland Axmed Cabdullaahi Yuusuf [Dawlad] ayaa uga mahad naqay shacabka magaaladaasi soo dhoweynta wanaagsan ee ay kusoo dhoweeyeen isaga iyo weftigiisa.
waxaana uu sheegay Wasiirku inay kormeer shaqo u joogeen maamumihii u dan beeyey gobolada Sanaag iyo Hayland, isla markaana waxa uu xusay in aan aduunka lagu arag shacab sheegta shacab kale inay mamaulaan taasina ay tahay nasiib daro iyo aqoon la’aan haysa maamulka Soomaliland.
Beesha Garxis,” Muuse Biixi iyo jeegaantiisa duulaanka ay ku qaadeen Tukaraq iyagaa doontaye ha is difaacaan.
Guddiga taakulaynta ciidanka difaaca Puntland oo shaaciyay inay dowladdu diyaar garow xoogan ugu jirto xoraynta gobolka Sool.